Sideen Dalkeena Udhisanaa – Hanoolaato Somalia National Party
Sideen Dalkeena Udhisanaa
January 1, 2019 jamalmahmed No Comments Political, Program dalkeena, dhismo
Soomaalay sideen dalkeena waa suaal weyn oo iskaashi wax qabad badan ubaahan. Waa hubaal laakiin in ficil la’aan aan waxba qabsami doonin.
Dismaha dalkeena waa dhismaha dowladeena, dhismaha dadkeena iyo dhismaha dhulkeena. Sidaasna waa in ay ukala horeeyaan oo saas ayay ukala muhiimsan yihiin.
Waxaan kabilaabayaa lahaanshada. Soomaaliya yaa leh. Goboladeena yaa leh. Magaalooyinkeena yaa leh. Dhulka oo dhan yaa leh. Dhirta dhulkeena kabaxda yaa leh. Badda yaa leh. Wabiyada yaa leh. Hawada Soomaaliya yaa leh.
Qof walba wuxuu un leeyahay wixii uu si xaq iyo halaal ah kuleeyahay sidaasna waa sida sharciga ah oo kaliya. Hanoolaato waxay diwaan galin doontaa wax walba oo gaar loo leeyahay taas oo lagu cadeyn doono shatti ay dowladu bixiso. Marka wixii aadan shatti uhaysan simply malihid. Wixii lalaan karo wixii aan lalahaan karin iyo loo lahaan karo intaba waxaa inoo sheegi doona sharci. Hadii khilaaf yimaadana waxaa ina kalasaari doonta hay’ad dowladeed sidaas oo kale keenii kuxad gudba xaquuq mid kale ama kuwa kale ay leeyihiina hay’ad dowladeed ayaa go’aankaas gaari doonta hadii ay ciqaab timaadana hay’ad dowladeed ayaa go’aamin doonta ciqaabi doontana.
Sida dastuurkeena kuqoran dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 1aad faqradiisa 2aad waa reebantahay in uu qof ama qeyb ay sheegato gobanimadda Soomaaliyeed ama u adeegsato si gaar ah. Sidaas darteed qof ama qeyb kamid ah bulshadeena Soomaaliyeed ma sheegan karto dhulka Soomaaliyeed, hawada Soomaaliyeed Biyaha badda ama wabiyada Soomaaliyeed.
Wax walba oo si sharci ah si gaar ah loogu leeyahay wixii kabaxsan oo dhan dowlada Soomaaliyeed ha ahaato mid magaalo, degmo, boqol ama tan dhexe ee Soomaaliyeed ayaa ka mas’uul noqon doonta sida lagu ayadaana go’aanka in gaar loo lahaan karo, sida lagu lahaan karo iyo sida lagu ween karo lahaanshadaas go’aankeeda leh. Dowlada laftigeeda go’aanadeeda waa in ay dhisnaadaan waafagsanaadaana sharciga dalkeena Soomaaliyeed.
Maxaa lawada leeyahay
Waxa lawada leeyahay waxay kabilaabanayaan dowlada laftigeeda. Dowlada waa in ay dadkoo dhan usiman yihiin dhismaheeda oo si demoqraadi ah xilka ku imaadaan si sharci ahna ku ween karaan. Doorashada uu qof walba oo qaan gaaray xag uleeyahay in uu wax ka doorto mas’uuliyiinta dowlada waa qiritaan iyo cadeyn in shaqsi kasta uu wax ka leeyahay dowlada dadka dowlada maamulana ay yihiin oo kaliya maamuleyaal maamulaya wixii dadkoo dhan kadhexeeyay. Hadii ay suurta gali lahayd in uu qof walba uu dhinaciisa kamaamulo sidaas ayaa lasameyn lahaa laakiin wey cadahay in aysan macquul ahayn oo hadii sidaas lasameyn lahaa waxna inooma qabsoomeen, go’aan lama gaari lahayn oo go’aan kasta muddo aad udheer ayaa lagu gaari lahaa shacabkuna haulahooda gaarka ah wey seegi lahayd sida in ay irsaaqadooda iyo tan familkooda ay raadiyaan, in ay noloshooda hor’mariyaan, in ay familadooda wakhti laqaataan iyo waxyaabo kale oo badan oo kuligood muhiim ah.
DHULKA, BIYAHA IYO HAWADA
Dhulka, biyaha oo dhan (bad, wabi, iyo kuwa dhulka hoostisa) iyo hawada Soomaaliyeed oo dhan waa lawa leeyahay dowladaana mas’uul ka ah. Qofkii raba in auu si gaar ah qeyb kamid ah uyeesho oo si gaar ah umaamusho ugana faaiidaysto waa in uu marka hore dowlada rukhsa weydiistaa. Sida saxda ah hadii aysan jirin qof ama qeyb bulsho kale oo kusheeganaysa, hadii aysan jirin qorshe kale oo ummaddeed oo horey ay dowlada udajisay, hadii aysan jirin khatar ay qofka lahaanshadaas dalbaday ama ummadda kale ugaga imaan karta lahaanshadaas i.w.l, iyo hadii lahaanshadaas aysan xaquuqda ummada kale ku xad gudbaynin waa in ay dowlada ay ugolaataa oo shatti bixisaa cadeynaysa in qofkaas uu si gaar ah uleeyahay.
Hanoolaato waxay rabtaa in uu qof kasta oo Soomaali ahai dhulkiisa hooyo deegan unoqdo. Waxaan diyaar unahay in qofkii raba dhul uu guri kadhisto aan siino dhul nus boos ama hal boos ah deegaanka uu asagu dagan yahay. Dhulka noocaas ah ay dowlada bixiso wuxuu yeelanayaa shatti ugaar ah iyo sharuudo. Waa in
Lama gaddi 3 sanno kahor waana in ugu yaraan 1 qol kadhisnaadaa
Waa aan canshuur lagu lahayn
Hanoolaato waxay udhisi doontaa magaalo walba xarun booliis, mid dowlada hoose oo ay xafiisyada kuyaal kamid yihiin xafiiska nikaaxa, xafiiska diwaan galiya dhalashada iyo dhimashada, xafiiska bixiya shattiyada ganacsiga oo dhan, xafiiska bixiya warqada lahaanshada (dhulalka, guryaha, ganacsi), xafiiska qorsheynta dhismaha magaalada (city planning office).